Ịtụgharị uche: Nhọrọ dị fechaa, enweghị kuki na nchịkọta Google | Martech Zone
Fraịde, Ọktọba 8, 2021 Fraịde, Ọktọba 8, 2021 Douglas Karr
N'izu a, enwere m ike isoro ụfọdụ ndị okenye na -azụ ahịa na Mahadum dị na mpaghara wee jụọ ụdị ntọala ha nwere ike ịrụ ọrụ ka ọ bụrụ ihe na -amasị ndị were ha n'ọrụ. M kwurịtara nke ọma Google Analytics… Ọkachasị n'ihi na ọ bụ ngwa ọrụ dị mgbagwoju anya nke m na -ahụ ọnụ ọgụgụ na -arịwanye elu nke ụlọ ọrụ na -eme mkpebi dị egwu. Ileghara ihe nzacha, ihe omume, mkpọsa, ebumnuche, wdg ga -enye data nke ga -eduba gị mgbe niile n'okporo ụzọ na -ezighi ezi.
Ihe m na -aga ịdọ aka na ntị bụ na Google Analytics bụ engine ajụjụ, ọ bụghị otu azịza engine. Oge ọ bụla ị sere eserese wee gụọ data ahụ… ị kwesịrị ị na -ajụ ihe ị na -ele anya wee gbalịa chọpụta ihe kpatara o ji dị ka ọ dị.
Nchịkọta Google bụkwa onye nnọchi anya ka ọ na -akpọghị ndị ọbịa batara na Akaụntụ Google. Nke a na -eme ka akụkọ dị ka nyocha isiokwu nke dugara onye ọbịa na saịtị gị abaghị uru ọ bụla n'ihi na ọ na -egosi gị ndị ọrụ na -amaghị aha na -abanyeghị… nke na -abụkarị obere pere mpe.
N'ezie, imirikiti ndị ọrụ - abanyela na akaụntụ Google - nwere data bara ụba nke naanị Google nwere ike ịhụ ma jiri maka mgbasa ozi ha. Maka ụlọ ọrụ na -asị, Emela ihe ọjọọ… nke ahụ bụ ụdị ihe ọjọọ. Nke ahụ kwuru, nchịkọta Google na -achịkwa ụlọ ọrụ ahụ yabụ na anyị niile ga -abụrịrị aka ochie na iji ya.
Dị ka ihe nchọgharị, mmemme ozi, na ngwa mkpanaka na-eme ka mgbochi nzuzo ha sie ike… ike ịgụ kuki ndị ọzọ (dị ka onye ọrụ Google banyere) na-agbada n'ike n'ike. Nke a na -emetụtakwa nchịkọta Google na ọ ga -atọ ụtọ ịhụ etu mmetụta ahụ si aga n'ihu. Ọ bụ ezie na gam akporo na Chrome nwekwara oke ahịa, enweghị obi abụọ ọ bụla maka ike iOS. Apple na -aga n'ihu itinye ọtụtụ ngwaọrụ n'aka ndị ọrụ ya iji belata nsuso.
Ederede Plausible dị fechaa - Oge 17 pere mpe karịa edemede Google Analytics, anaghị eji kuki ma ọ bụ soro data nkeonwe ọ bụla, yabụ na ọ na -agbaso ụkpụrụ nzuzo, ka na -ejikwa ihe ndị na -ajụ ajụjụ UTM ka ị ghara ichegbu onwe gị maka ịhapụ nsuso mgbasa ozi ị na -eme ugbu a. Ọ gụnyekwara mkpesa akpaaka site na email ma ọ bụrụ na ị na-achọ ngwọta chere ndị ahịa ihu.
Plazible na -enyocha ọnụọgụ metrik pere mpe ma gosi ha na dashboard dị mfe nghọta. Kama ị na -enyocha metrik ọ bụla echepụtara, ọtụtụ n'ime ha nke ị gaghị ahụ maka ya, Plausible na -elekwasị anya na stats webụsaịtị kacha mkpa.
Enweghị menu ngagharị. Enweghi menus ndị ọzọ. Ọ dịghị mkpa ịmepụta akụkọ omenala. Plazible na -enye gị dashboard nchịkọta weebụ dị mfe ma baa uru n'ime igbe.
Enwere ezi uche dị mfe iji ma ghọta ya na enweghị ọzụzụ ma ọ bụ ahụmịhe gara aga. Ihe niile ịchọrọ ịma gbasara okporo ụzọ weebụsaịtị gị dị n'otu ibe:
Họrọ oke oge ịchọrọ ịtụle. A na -egosi ọnụọgụ ndị ọbịa na akpaghị aka n'otu elekere, kwa ụbọchị ma ọ bụ kwa ọnwa. A na -ahazi etiti oge izizi n'ime ụbọchị iri atọ gara aga.
Hụ ọnụọgụ ndị ọbịa pụrụ iche, mkpokọta nlele peeji, ọnụego bounce na oge nleta. Meta ndị a gụnyere ntụnyere pasent na oge gara aga ka ị ghọta ma usoro a na -agbago ma ọ bụ na -agbada.
N'okpuru ebe a ị ga -ahụ isi mmalite nke okporo ụzọ niile na ibe a kacha eleta na saịtị gị. Nbudata ọnụego nke onye na -ekwu maka ya na ibe ya gụnyere.
N'okpuru akwụkwọ ntụnye aka na ibe a kacha eleta, ị na -ahụ ndepụta nke obodo okporo ụzọ gị na -abịa. Ị nwekwara ike ịhụ ngwaọrụ, ihe nchọgharị na sistemụ arụmọrụ ndị ọbịa gị na -eji.
N'ikpeazụ mana ọbụghị, ị nwere ike soro ihe omume na ebumnuche iji mata ọnụọgụ ndị ọbịa tụgharịrị, ọnụego mgbanwe, iji ghọta onye na -atụgharị na saịtị ntụnye na -eziga okporo ụzọ nke na -agbanwe nke kacha mma.
Site na Plausible, ị ga -enweta nyocha weebụ niile dị mkpa na nlele ka ị nwee ike lekwasị anya na ịmepụta saịtị ka mma.
Maka kuki, ị nwekwara ike melite onye nnọchiteanya iji jee ozi edemede nyocha site na ngalaba gị Aha dị ka njikọ ndị otu mbụ wee nweta ọnụ ọgụgụ ziri ezi. Nke kachasị nke ọma, a gaghị ekekọrịta ma ọ bụ resị data saịtị gị ndị ọzọ. A gaghị enwe ego, na -egwupụta ma na -egbute ya maka ọnọdụ onwe onye na omume.
Ihe ezi uche adịghị na ya n'efu, mana ọ bụ ezigbo ọnụ ma dabere na ọnụọgụ saịtị na nlele peeji nke ị na -enweta.
Bido Ọnwụnwa n'efu Lelee ngosi ngosi ndụ
Tags: Analyticsmkpọsa nyochanchịkọta cookielessnchịkọta dị mfenchịkọta ndị mbụGoogle Analyticsnchịkọta nchịkọta googlenchịkọta dị fechaadị mmaNchịkọta na -akwado ihe nzuzonchịkọta dị mfeọ bụ